कोरानाको डरले दशैँ तिहारमा जस्तै काठमाण्डौ छोडेर आफ्नै गाउँ फर्किन थाले सर्वसाधारण ! एकै दिनमा ९० हजार सर्वसाधारणले राजधानी छोडे ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरानाको डरले दशैँ तिहारमा जस्तै काठमाण्डौ छोडेर आफ्नै गाउँ फर्किन थाले सर्वसाधारण ! एकै दिनमा ९० हजार सर्वसाधारणले राजधानी छोडे !
कोरानाको डरले दशैँ तिहारमा जस्तै काठमाण्डौ छोडेर आफ्नै गाउँ फर्किन थाले सर्वसाधारण ! एकै दिनमा ९० हजार सर्वसाधारणले राजधानी छोडे !
६ चैत काठमाडौं :हिजोसम्म कोरोनाभाइरसको त्रासले काठमाडौं बाहिर जाने लामो दूरीका बसहरु रित्तो गुड्न थालेका थिए । ८० प्रतिशतले यात्रुहरु घटेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जानकारी दिएको थियो । तर आज (बिहिबार) बिहानदेखि उपत्यकाबाट यात्रु बाहिरिनेक्रम शुरु भएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अरु दिनको तुलनामा पछिल्ला दिनमा उपत्यकाबाट घर जाने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । उपत्यकाको नागढुङ्गा, जगाति, फर्पिङ र नागार्जुन नाकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर विगतका दिनभन्दा हिजो र आज उपत्यका बाहिर जाने यात्रुको सङ्ख्या बढेको बताउनुहुन्छ । ‘नयाँ बसपार्कमा अरुका दिनभन्दा हिजोआज घर जानके यात्रुको भीड लागेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सरकारले अन्तिम समयमा आएर एसइइ परीक्षा स्थगत गरेसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरुको संख्या बढेको हो ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : गाडीभाडा जत्तिकै सस्तिएको हवाइ भाडा भोलीदेखि महँगो बन्दै
६ महिनाअघि चीनमा मृत्यु भएका पुष्करको शब नेपाल ल्याइयो
शनिबार काठमाडौंका यी स्थानमा जानेछ ८ घण्टा बत्ती
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका बेला हिँडेको बाटो नुवाकोट हँुदै काठमाडौँसम्म ‘एकीकरण टर्च’ ¥याली गरिने
कतारले फर्कायो २० नेपाली कामदार ( कारण यस्तो छ )
मुस्लिम युवतीहरुलाई चिनियाँ पुरुषसँग विवाह गराउँदै बेचबिखन